लकडाउनबारे के भन्छन् सर्वसाधारण ? « Mero LifeStyle
लकडाउनबारे के भन्छन् सर्वसाधारण ?
कोरोना महामारीका कारणले २०७६ चैत ११ बाट लकडाउन गरिएको थियो । कोरोनाको दोस्रो लहर आएपछि सरकारले २०७७ चैत्र ८ बाट भीडभाड हुने कुनै पनि कार्य नगर्न सबैमा अपिल गरेको छ ।
कोरोना संक्रमण दर तीव्र गतिमा बढ्दै छ । त्यसैले, गत वर्षको नौ महिनाको जस्तै बन्दाबन्दी फेरि हुने हो कि, आम मानिसको मनमष्तिष्कमा यस्तै त्रास छ । यसै सन्दर्भमा ‘लकडाउन हुनु पर्छ वा पर्दैन’ भन्ने विषयमा मेरोलाइफस्टाइल टिमले लिएको जनमत यहाँ समेटिएको छ ।
बसन्तपुरको कुमारी घर अगाडी बसिरहेका हेमन्त शाह लकडाउन गर्नुपर्ने जरुरी नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘लकडाउन गर्न जरुरी छैन । लकडाउन हुनलाई देशको स्थिति हेर्नुपर्यो पहिला, जनता भोक–भोकै मारिराखेको लकडाउन गर्छु भनेर हुन्छ ?’
त्यसैगरी, न्युरोडका असविन श्रेष्ठको विचार पनि लकडाउन नगर्नु पर्ने नै देखिन्छ । उनी भन्छन् ‘लकडाउन गर्नु पर्दैन, पहिला जस्तै दुःख हुन्छ ।’ यसैगरी कुमार कार्कीको विचार अलि फरक छ । कोरोना कहरबाट बच्न लकडाउन व्यवस्थित रूपले गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘काम गर्ने मजदुरहरुले काम गर्न पाउनुपर्छ र खाना पाउनु पर्छ ।’ बसन्तपुरमा सामान बेचिरहेका राजकुमार खड्काको विचार भिन्न छ । उनी भन्छन्, ‘लकडाउन गर्नुपर्छ, लकडाउन गरियो भने घर बस्न पाइन्छ ।’
बसन्तपुरको कुमारी घर अगाडी बसिरहेका हेमन्त शाह भन्छन् ‘लकडाउन गर्न जरुरी छैन । लकडाउन हुनलाई देशको स्थिति हेर्नु पर्यो पहिला, जनता भोक–भोकै मारिराखेको लकडाउन गर्छु भनेर हुन्छ ?’
‘सबैजनाले कोरोना सम्बन्धि आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाए लकडाउन गर्नै पर्दैन,’ वसन्तपुरको सेतो मछिन्द्रनाथ जात्रामा भेटिएका बालकृष्ण महर्जन भन्छन्, ‘लकडाउन गर्नुपर्दैन, लकडाउन गरे जात्रा पर्व हराउँछ ।’
त्यसैगरी जात्रामै भेटिएका विजयकुमार कर्माचार्य व्यवस्थित रुपले लकडाउन गर्नुपर्ने बताउँदै भन्छन्, ‘लकडाउन गर्नुपर्छ तर पहिलाजस्तो एकदमै निषेध हुने गरी होइन, व्यवस्थित रुपमा गर्नुपर्छ ।’
व्यापारी नीता श्रेष्ठ लकडाउन खासै जरुरी नरहेको तर संक्रमण बढेमा लकडाउन गर्नुपर्ने विचार राख्छिन् । यसैगरी बौद्धमा भेटिएकी कान्छी माया बस्नेतले कोरोना महामारीका कारणले मान्छेको मृत्यु धेरै भएकाले लकडाउन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘धेरै संक्रमण फैलियो भने लकडाउन हुनुपर्छ, संक्रमणका कारणले मान्छेहरु धेरै मरिरहेका छन्, त्यसैले हुनुपर्छ ।’
बौद्धमा भेटिएकी प्रमिला गोजु भन्छिन्, ‘लकडाउन नभएको राम्रो, लकडाउन भएमा फेरि पहिलाको जस्तै हुन्छ । नेपालमा सबैजना घरमा बसी–बसी खाना सक्ने स्थिति सबैको छैन, त्यसैले लकडाउन गर्नु पर्दैन ।’
यसैगरी प्रतीक थापाको पनि लकडाउन गर्नु पर्नेमै जोड छ । उनी भन्छन्, ‘लकडाउन हुनुपर्छ । दिनदिनै संक्रमण बढीरहेको छ । यदि लकडाउन भएन भने भयावह हुन्छ ।’ कर्मनिरन्जन लामाको विचार पनि लकडाउन गर्नुपर्नेमै छ । उनी भन्छन्, ‘कोरोना यसै गरी बढ्दै गएमा लकडाउन हुनुपर्छ तर मान्छेले आफै स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएमा पर्दैन जस्तो लाग्छ ।’
यसैगरी बौद्धमा भेटिएकी प्रमिला गोजुको विचार फरक छ । लकडाउन भएमा पहिलाकै लकडाउन जस्तै खान नपाई भोकभोकै मर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुने उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘लकडाउन नभएको राम्रो, लकडाउन भएमा फेरि पहिलाको जस्तै हुन्छ । नेपालमा सबैजना घरमा बसी–बसी खाना सक्ने स्थिति सबैको छैन, त्यसैले लकडाउन गर्नुपर्दैन ।’